कसरी क्रिप्टोकरन्सीले नेपालमा वित्तीय सेवामा क्रान्ति ल्यायो ? – a2zrepairhome Services
कसरी क्रिप्टोकरन्सीले नेपालमा वित्तीय सेवामा क्रान्ति ल्यायो ?
LeaveaComment	/ Uncategorized / By a2zhomeservice
Cryptocurrency भनेको के हो र यसले कसरी काम गर्छ?
क्रिप्टोकरेन्सी एक डिजिटल मुद्रा हो जसले आफ्नो लेनदेन सुरक्षित गर्न क्रिप्टोग्राफी प्रयोग गर्दछ। क्रिप्टोकरेन्सीको विकेन्द्रीकृत प्रकृतिले यसलाई कुनै पनि केन्द्रीय प्राधिकरण वा बैंकहरू बिना सञ्चालन गर्न अनुमति दिन्छ। ब्लकचेन एउटा यस्तो प्रविधि हो जसले क्रिप्टोकरेन्सीहरूलाई अन्तर्निहित गर्छ र तिनीहरूलाई केन्द्रीय प्राधिकरण बिना काम गर्न सक्षम बनाउँछ। यो अनिवार्य रूपमा एक साझा, वितरित खाता हो जसले नेटवर्कमा सबै लेनदेनहरू कालानुक्रमिक क्रममा रेकर्ड गर्दछ। यो खातालाई आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन ट्र्याक गर्ने, पहिचान प्रमाणित गर्न, वा नीति परिवर्तनहरूमा मतदान गर्न र यसले कसरी काम गर्छ?
Blockchain टेक्नोलोजीमा धेरै उद्योगहरूलाई बाधा पुर्‍याउने क्षमता छ किनकि यसले डिजिटल लेनदेनको लागि विकेन्द्रीकृत प्लेटफर्म प्रदान गर्दछ जुन कुनै एकल निकायले छेडछाड गर्न सक्दैन।
क्रान्तिको शुरुवात: कसरी बिटकोइन र ब्लकचेन प्रविधिले नेपालको धनी राष्ट्रलाई परिवर्तन गर्यो ?
नेपाल सबै गलत कारणले समाचारमा रहने देश हो । तिनीहरू दशकौंदेखि आफ्नो पूर्वाधार र अर्थव्यवस्थामा काम गरिरहेका छन्, तर अझै पनि बिजुली वा इन्टरनेटमा व्यापक पहुँच छैन। 2018 को प्रारम्भमा, आफ्नो देशमा गरिबीको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न चाहने नेपाली उद्यमीहरूको समूहद्वारा “क्रिप्टो-किप” नामक बेनामी वेबसाइट सुरू गरिएको थियो। उनीहरूले क्रिप्टोकरेन्सी बनाएका थिए जसलाई नेपालमा परियोजनाहरूमा लगानी गर्न प्रयोग गरिने छ। क्रिप्टो-किप परियोजनालाई ब्लकचेन टेक्नोलोजी र क्रिप्टोकरेन्सी मार्फत आफ्नो राष्ट्रको पुनर्निर्माणमा मद्दत गर्न चाहने विश्वभरका मानिसहरूको चन्दाद्वारा वित्त पोषित गरिएको थियो। परियोजनाले $5मिलियन अमेरिकी डलर उठायो, जुन 1 मिलियन मानिसहरूलाई 10 वर्षको लागि सफा पानीको पहुँच गर्न पर्याप्त छ।
किन क्रिप्टोकरेन्सी नेपालको अर्थतन्त्रमा सास फेर्न मद्दत गर्ने जवाफ हो?
नेपाली अर्थतन्त्र वर्षौंदेखि संघर्षरत छ र यो देश विश्वकै गरिब मुलुकमध्ये एक हो । नेपालको जनसङ्ख्या तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ र उनीहरू आफ्नो अर्थतन्त्रमा केही सास फेर्ने बाटो खोजिरहेका छन्। Cryptocurrency तिनीहरूलाई मद्दत गर्न एक जवाफ हो। क्रिप्टोकरेन्सी डिजिटल मुद्रा हो जसले क्रिप्टोग्राफीको प्रयोग लेनदेन सुरक्षित गर्न, नयाँ एकाइहरूको सिर्जना नियन्त्रण गर्न, र कोषको स्थानान्तरण प्रमाणित गर्न प्रयोग गर्दछ। यसले मानिसहरूलाई भुक्तानीहरू प्रशोधन गर्नको लागि बैंक वा क्रेडिट कार्ड कम्पनीमा भरोसा नगरी अज्ञात रूपमा लेनदेन गर्न अनुमति दिन्छ। क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्य आपूर्ति र मागको आधारमा उतारचढाव हुन्छ तर माग बढेको वा आपूर्ति घटेको कारणले निश्चित बिन्दुहरूमा यो मूल्यमा उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ। यसको मतलब गरिबीबाट बाहिर निस्कने बाटो खोजिरहेका व्यक्तिहरूले क्रिप्टोकरेन्सीलाई लगानीको साधनको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्।
नेपालमा क्रिप्टो-किपका फाइदाहरू के हुन्?
क्रिप्टोकरेन्सी लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ किनकि यसमा धेरै फाइदाहरू छन्। यो एक डिजिटल मुद्रा हो जसले लेनदेन सुरक्षित गर्न र नयाँ एकाइहरूको सिर्जना नियन्त्रण गर्न क्रिप्टोग्राफी प्रयोग गर्दछ। क्रिप्टो-किप एक क्रिप्टोकरेन्सी हो जुन नेपाल सरकारले डिजिटल मुद्रामा लगानी गर्न र यसलाई दैनिक लेनदेनका लागि प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले ल्याएको हो।
आज क्रिप्टोकरन्सी प्रयोग गरेर हामी कसरी लाभ उठाउन सक्छौं?
क्रिप्टोकरेन्सी एउटा डिजिटल मुद्रा हो जसले लेनदेनहरू सुरक्षित र प्रमाणित गर्नका साथै नयाँ एकाइहरूको सिर्जना नियन्त्रण गर्न क्रिप्टोग्राफी प्रयोग गर्दछ। यो कुनै पनि बैंक वा सरकार द्वारा नियन्त्रित छैन, मतलब यो तिनीहरूले हेरफेर गर्न सक्दैन। यो मुद्राको विकेन्द्रीकृत रूप हो जहाँ तपाईं बिचौलियाको आवश्यकता बिना संसारमा जो कोहीसँग व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ। Cryptocurrency यसको आफ्नै उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गरी आज धेरै फरक उद्योगहरूमा प्रयोग गरिँदै आएको छ। फाइनान्स देखि गेमिङ सम्म, क्रिप्टोकरेन्सीले आफ्नो सरलता, दक्षता र पारदर्शिताका कारण विभिन्न क्षेत्रहरूमा घर फेला पारेको छ। यदि तपाईं क्रिप्टोकरन्सीको बारेमा थप जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, यस लेखले तपाईंलाई आज मानिसहरूलाई कसरी फाइदा पुर्‍याउँछ र यसले भविष्यमा के ल्याउन सक्छ भन्ने बारे केही जानकारी दिनेछ!
WE ARE AVIABLE IN
Address: GONGABU Kathmandu, Nepal, Call Us: 982-6178454 Email: a2zrepair19@gmail.com
Copyright © 2022 a2zrepairhome Services
Design By Nabin Bhatta